Gịnị Ga-enyere M Aka ma Mụ na Onye Mụ na Ya Na-akpa Kwụsị Ịkpa? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Turkmen Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Yoruba Zulu
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Steven kwuru, sị: “Mgbe mụ na onye mụ na ya na-akpa kwụsịrị ịkpa, obi gbawara m. O nwebeghị mgbe obi jọrọ m njọ otú ọ jọrọ m mgbe ahụ.”
Ụdị ihe ahụ ò metụla gị? Ọ bụrụ na o metụla gị, isiokwu a nwere ike inyere gị aka.
Otú ọ na-adị
Gị na onye gị na ya na-akpa kwụsị ịkpa, ọ na-ewute ma gị ma onye ahụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ gịnwa kwuru ka unu kwụsị ịkpa, mara na o nwere ike ịdị gị otú a ọ dị Jasmine. Ọ sịrị: “Obi m na-ama m ikpe ma m cheta na m mejọrọ onye m hụburu n’anya. Achọghị m ka ụdị ihe a mee m ọzọ.”
Ọ bụrụ na ọ bụghị gị chọrọ ka unu kwụsị ịkpa, ị ga-amata ihe mere ndị mmadụ ji ekwu na ọ na-adị ka ọ̀ bụ mmadụ nwụnahụrụ gị. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Janet kwuru, sị: “Ọ kpataara m iru uju, iwe, obi ọjọọ, na ihe ndị ọzọ. Mana, mgbe ọ fọrọ obere ka o ruo otu afọ, m mechara wepụ obi m na ya.”
Nke bụ́ eziokwu bụ: Gị na onye gị na ya na-akpa kwụsị ịkpa, o nwere ike ime ka ike ụwa gwụ gị. Baịbụl kwuru na: “Mmụọ nke dara mbà na-amịkpọ ọkpụkpụ.”—Ilu 17:22.
Kọọrọ otu onye toro eto otú obi dị gị. Baịbụl sịrị: “Ezi enyi nwere ịhụnanya mgbe niile, ọ bụkwa nwanne a mụrụ maka oge nsogbu.” (Ilu 17:17) Ịkọrọ nne gị ma ọ bụ nna gị, ma ọ bụkwanụ otu onye toro eto otú obi dị gị ga-eme ka ị mara ihe ị ga-eme.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Janet sịrị: “M nọọrọ onwe m ruo ọtụtụ ọnwa, o nweghịkwa onye m kọọrọ ihe mere m. Ma, ihe nyeere m aka bụ na m mechara kọọrọ ndị enyi m ihe mere m. Ọ bụ mgbe ahụ ka obi bịara dịwa m mma.”
Si n’ihe ahụ mere mụta ihe. Amaokwu Baịbụl ọzọ sịrị: “Nweta amamihe, nweta nghọta.” (Ilu 4:5) Anyị nwere ike isi n’ihe mere anyị matakwuo ụdị onye anyị bụ na ihe anyị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ihe agaghị otú anyị tụrụ anya ya.
Steven anyị kwuru maka ya ná malite kwuru, si: “Mgbe mụ na enyi m nwaanyị kwụsịrị ịkpa, otu enyi m jụrụ m sị, ‘N’oge a niile gị na ya kpara, gịnị ka ị mụtara? Olee otú ihe ịmụtara ga-esi nyere gị aka ma gị na onye ọzọ kpawa?’”
Kpee ekpere. Baịbụl kwuru, sị “Tụkwasị Jehova ibu arọ gị, ya onwe ya ga-akwadokwa gị.” (Abụ Ọma 55:22) Ekpere ga-enyere gị aka, meekwa ka ị mata ma è nwere uru mgbasa ahụ unu gbasara baara gị.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Marcia sịrị: “Na-ekpe ekpere mgbe niile. Jehova ma otú obi dị gị na ihe merenu karịadị otú gịnwa ma.”
Na-enyere ndị ọzọ aka. Baịbụl sịrị: “Na-elekwasị anya, ọ bụghị naanị n’ọdịmma onwe unu, kamakwa n’ọdịmma nke ndị ọzọ.” (Ndị Filipaị 2:4) Ọ bụrụ na ị na-enyere ndị ọzọ aka, ọ ga-eme ka ị mata na e nwere uru mgbasa ahụ unu gbasara baara gị.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Evelyn sịrị: “Gị na onye gị na ya na-akpa kwụsị ịkpa, ọ nwere ike ịdị gị ka ụwa ọ̀ gwụla. Ọ na-akadị afụ ụfụ karịa ebe mmadụ merụrụ ahụ́. Ma achọpụtala m na ọ ga-emecha kwụsị. Naanị oge ka ọ ga-ewe, mana m ga-emecha nweta onwe m.”
Ihe Ndị Ga-enyere Gị Aka ma Gị na Onye Gị na Ya Na-akpa Kwụsị Ịkpa
Gịnị ga-enyere mmadụ aka idi ya ma ya na onye ọ chọrọ ịlụ gbasaa.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ga-enyere M Aka ma Mụ na Onye Mụ na Ya Na-akpa Kwụsị Ịkpa?
ijwyp isiokwu 66